२ कोरिन्थी ११ | अनलाइन बाइबल | नयाँ संसार अनुवाद (२०१०)
२ कोरिन्थी ११:१-३३
११ मेरो थोरै अव्यावहारिकतालाई तिमीहरूले सहिदिए हुनेथियो। तर वास्तवमा तिमीहरूले मलाई सहिरहेका पनि छौ! २ किनकि म ईश्वरीय डाहले तिमीहरूको निम्ति डाही भएको छु, किनकि एक जना पुरुषसित विवाह गराइदिन म आफैले तिमीहरूको मगनी गरिदिएको छु, ताकि तिमीहरूलाई एउटी चोखो कुमारी केटीलाई जस्तै गरी ख्रीष्टलाई सुम्पन सकूँ। ३ तर सर्पको धुर्त्याइँद्वारा हव्वा बहकिएजस्तै तिमीहरूको दिमाग पनि भ्रष्ट भएर ख्रीष्टको हक लाग्ने तिमीहरूको निष्कपटता अनि चोखोपन खोसिएला कि भन्ने डर मलाई लागेको छ। ४ किनकि यदि कोही आएर तिमीहरूलाई हामीले जुन येशूको प्रचार गरेका थियौं, त्योभन्दा बेग्लै येशूको प्रचार गर्छ वा जुन तागतले* तिमीहरूको मनोभावलाई प्रभावित गरेको थियो, त्योभन्दा बेग्लै तागतले तिमीहरूको मनोभावलाई प्रभावित गर्न खोज्छ वा तिमीहरूले जुन सुसमाचार सुनेका थियौ, त्योभन्दा बेग्लै सुसमाचार सुनाउँछ भने तिमीहरू सजिलै उसको कुरा पत्याउँछौ। ५ किनकि तिमीहरूका महाप्रेषितहरूभन्दा कुनै कुरामा म आफूलाई कम ठान्दिनँ। ६ म बोल्नमा त्यति सिपालु नहुँला तर ज्ञानमा त पक्कै छु। हामीले सबै कुरामा हरतवरले तिमीहरूलाई त्यो ज्ञान प्रकट गरेका छौं। ७ अथवा तिमीहरू उचालिओ भनेर आफैलाई होच्याएर अनि सित्तैंमा तिमीहरूलाई परमेश्वरको सुसमाचार खुसीसाथ घोषणा गरेर के मैले पाप गरें? ८ तिमीहरूको सेवा गर्न मैले अरू मण्डलीहरूको मदत स्वीकारेर तिनीहरूलाई लुटें। ९ अनि तिमीहरूमाझ उपस्थित भएको बेला जब म खाँचोमा परें, तब तिमीहरूमध्ये कसैको पनि बोझ बनिनँ। किनकि म्यासिडोनियाबाट आएका भाइहरूले मेरो आवश्यकता प्रशस्त गरी पूरा गरिदिएका थिए। हो, कुनै किसिमले तिमीहरूको बोझ नबन्ने मैले कोसिस गरें र त्यस्तै गरिरहनेछु। १० ख्रीष्टको सत्य ममा रहुन्जेल अखैयाका इलाकाहरूमा यस्तो घमन्ड गर्नदेखि मलाई कसैले रोक्न सक्नेछैन। ११ म किन तिमीहरूको बोझ बनिनँ? के मैले तिमीहरूलाई प्रेम नगरेकोले हो? परमेश्वर जान्नुहुन्छ, म तिमीहरूलाई प्रेम गर्छु। १२ म जे गर्दैछु, अब त्यही नै गरिरहनेछु, ताकि आफ्नो ओहदाको घमन्ड गरेर हामीसित बराबर हुन खोज्नेहरूले कुनै बहाना नपाऊन्‌। १३ किनकि यिनीहरू झूटा प्रेषित अनि छली काम गर्ने मानिसहरू हुन्‌ र यिनीहरूले आफूलाई ख्रीष्टका प्रेषितहरूको भेषमा परिवर्तन गर्छन्‌। १४ अनि यसमा अचम्म मान्नुपर्ने कुनै कुरा छैन, किनकि सैतानले पनि आफूलाई ज्योतिर्मय स्वर्गदूतको भेषमा परिवर्तन गर्छ। १५ तसर्थ, त्यसका सेवकहरूले पनि आफूलाई परमेश्वरको स्तरबमोजिम असल काम गर्ने सेवकहरूको भेषमा परिवर्तन गर्नु कुनै ठूलो कुरा होइन। तर तिनीहरूले आफ्नो कामअनुसारको फल पाउनेछन्‌। १६ म फेरि भन्छु, कुनै मानिसले मलाई अव्यावहारिक नठानोस्। यदि तिमीहरू मलाई त्यस्तै ठान्छौ भने पनि, अव्यावहारिक नै हुँ भनी सम्झेर मलाई स्वीकार, ताकि म पनि केही घमन्ड गर्न सकूँ। १७ म जे भन्छु, प्रभुको उदाहरण अनुकरण गरेर होइन तर अव्यावहारिक मानिसहरूले झैं अति विश्वस्त भई घमन्ड गरेर भन्छु। १८ थुप्रै मानिस सांसारिक कुराहरूमा घमन्ड गर्छन्‌, त्यसैले म पनि त्यस्तै घमन्ड गर्नेछु। १९ तिमीहरू यति व्यावहारिक छौ कि, अव्यावहारिक मानिसहरूलाई तिमीहरू खुसीसाथ सहन्छौ। २० भनौं भने, तिमीहरू यस्ता जोसुकैलाई सहन्छौ, जसले तिमीहरूलाई दास बनाउँछ, जसले तिमीहरूलाई लुट्छ, जसले तिमीहरूसित भएको कुरा खोस्छ, जसले तिमीहरूको टाउकोमा टेक्छ, जसले तिमीहरूलाई मुखमा झापड हान्छ। २१ मैले यस्तो भन्न पर्नु हाम्रो लागि लाजमर्दो कुरा हो, किनकि कसै-कसैलाई हामी आफ्नो अख्तियार ठीकसित चलाउँदैनौं भन्ने लाग्दो रहेछ। तर म अव्यावहारिक मानिसले झैं भन्दैछु, यदि कसैले केही कुरामा घमन्ड गर्छ भने म पनि त्यस्तो घमन्ड गर्न सक्छु। २२ के तिनीहरू हिब्रूहरू हुन्‌? म पनि हुँ। के तिनीहरू इस्राएलीहरू हुन्‌? म पनि हुँ। के तिनीहरू अब्राहामका सन्तान हुन्‌? म पनि हुँ। २३ के तिनीहरू ख्रीष्टका सेवकहरू हुन्‌? बौलाहा मानिसले झैं म चिच्याएर भन्छु, म झनै हुँ: कठिन परिश्रम गर्नमा, झ्यालखानामा बारम्बार थुनिनमा, अचाक्ली मुक्का खानमा, बारम्बार मृत्युको मुखमा पर्नमा। २४ मैले यहूदीहरूको हातबाट पाँच चोटि एक कम चालीस कोर्रा खाएँ, २५ तीन खेप म डन्डाले पिटिएँ, एक खेप मलाई ढुङ्गाले हानियो, तीन चोटि म चढेको जहाज क्षतिग्रस्त भयो, एक रात एक दिन मैले समुद्रमा बिताएँ। २६ यात्रामा बारम्बार, नदीहरूको खतरामा, डाँकुहरूको खतरामा, आफ्नै जातिको खतरामा, अन्यजातिको खतरामा, सहरको खतरामा, उजाडस्थानको खतरामा, समुद्रको खतरामा, झूटा भाइहरूबीच खतरामा म परेको छु। २७ मैले मजदुरी अनि कडा मेहनत गरेको छु, कति चोटि अनिदो रात काटेको छु, भोक अनि प्यास सहेको छु, धेरै चोटि नखाई बसेको छु, जाडो अनि नग्नता खपेको छु। २८ यी बाहिरी कुराहरूबाहेक सबै मण्डलीको चिन्ताले मलाई दिनदिनै सताउँछ। २९ को कमजोर हुँदा मचाहिं कमजोर भइनँ र? कसले ठेस खाँदा मलाई चाहिं औडाहा भएन र? ३० घमन्ड गर्नु नै छ भने म आफ्ना कमजोरीहरू प्रकट हुने कुराहरूमा घमन्ड गर्नेछु। ३१ मैले झूट बोलेको होइन भनेर प्रभु येशूको परमेश्वर अनि बुबा जान्नुहुन्छ, जसको सदासर्वदा प्रशंसा गरिनुपर्छ। ३२ दमीशकमा राजा अरितसका राज्यपालले मलाई पक्रन दमीशक सहरमा पहरा दिएका थिए, ३३ तर भाइहरूले मलाई टोकरीमा राखेर पर्खालको झ्यालबाट तल ओराले अनि म तिनको हातबाट उम्कें।
^ २को ११:४ * अर्थात्‌, “परमेश्वरको तागतले।”